Kwebiwe ubucwebe bezigidi emzini waseThekwini | News24
Kwebiwe ubucwebe bezigidi emzini waseThekwini
Durban – Umndeni kudingeke ubukele izigebengu zenza umathanda emzini wawo, zizitapela izimpahla, imali kanye nobucwebo obungabiza u-R1m esehlakalweni sokuphanga esenzeke ngoLwesine ebusuku.
Usomabhizinisi waseMerebank, uRanji Thandroyen, 61, ubehleli endlini namadodakazi akhe amabili bedla ngesikhathi abalisa abebegqoke kahle betheleka endlini.
Funda nalolu daba: Babhekene nokuqondiwa kwezigwegwe kwelokukhwabanisa
“Bekuyizithuba zabo-17:45 umkhwenyana wendodakazi yami ubesegaraji esebenza. Abalisa bangena ngesango, ebelivuliwe, base bengena endlini,” usho kanje.
“Omunye wabo uqonde kumina abanye endodakazini yami uPatricia nakubazukulu bami. Babakhomba ngezibhamu emakhanda.
Okhulumela amaphoyisa aKwaZulu-Natal uColonel Jay Naicker uthe amaphoyisa aseBrighton Beach ayaphenya kodwa akukaboshwa muntu.